Traduzioni di walirudi da SwahiliaBirmano - MyMemory
Hai cercato la traduzione di walirudi da SwahiliaBirmano
မတွေ့သောအခါ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ပြန်၍ရှာကြ၏။
Kutokana na hayo, wengi wa wafuasi wake walirudi nyuma wasiandamane naye tena.
ထိုအခါမှစ၍ တပည့်တော်များတို့သည် ကိုယ်တော်နှင့်မပေါင်းဘော်ဘဲ ဆုတ်သွားကြ၏။
တမန်တော်တို့သည် ယေရှုထံတော်၌ စုဝေး၍၊ မိမိတို့ပြုသမျှ သွန်သင်သမျှတို့ကို ကြားလျှောက်ကြ၏။
မင်းလုလင်တို့သည် ထောင်သို့ရောက်လျှင်၊ တမန်တော်တို့ကို ထောင်ထဲမှာ မတွေ့သည်ရှိသော် ပြန် ကြ၍၊
မိဘတို့သည် ထာဝရဘုရား၏ ပညတ်တရားအတိုင်း ပြုရသမျှတို့ကို အကုန်အစင်ပြုပြီးမှ၊ ဂါလိလဲ ပြည်၊ နာဇရက်အမည်ရှိသော မိမိတို့ မြို့သို့ပြန်ကြ၏။
နက်ဖြန်နေ့၌မြင်းစီးသူရဲတို့ကို ပေါလုနှင့်တကွ သွားစေခြင်းငှါ လွှတ်လိုက်၍ မိမိတို့သည် ရဲတိုက်သို့ ပြန်ကြ၏။
Watu wale wote waliokuwa wamekusanyika hapo kwa ajili ya tukio hilo, walipoona hayo yaliyotukia, walirudi makwao wakijipiga vifua kwa huzuni.
ထိုအမှုကို အကြည့်အရှုလာသောသူအပေါင်းတို့သည် ထိုအခြင်းအရာများကိုမြင်လျှင်၊ ရင်ပတ်ကို ခတ်၍ ပြန်သွားကြ၏။
သိုးထိန်းတို့သည်လည်း မိမိတို့အားပြောနှင့်သည်အတိုင်း ကြားမြင်သမျှသော အကြောင်းအရာကို ထောက်၍၊ ဘုရားသခင်ကို အံ့ဩချီးမွမ်းလျက် ပြန်သွားကြ၏။
ထိုနောက်မှ ပြန်သွားပြီးလျှင် ဆီမွှေးနှင့် နံ့သာမျိုးကို ပြင်ဆင်၍ ပညတ်တော်အတိုင်း ဥပုသ်နေ့၌ အလုပ်မလုပ်ဘဲ နေကြ၏။
တမန်တော်တို့သည် သက်သေခံ၍ သခင်ဘုရား ၏နှုတ်ကပတ် တရားတော်ကိုဟောပြီးမှ၊ ယေရုရှလင်မြို့ သို့ ပြန်သွားရာ၊ ရှာမာရိရွာများတို့၌လည်း ဧဝံဂေလိ တရားကို ဟောပြောကြ၏။
abraham (Latino>Greco)semidependiente (Spagnolo>Inglese)vast information (Malese>Inglese)whatevers (Inglese>Bengalese)ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ (Panjabi>Inglese)ubi sunt gaudia (Latino>Tedesco)ciklopentadienil (Ungherese>Inglese)pinataniman ang lupa (Tagalog>Inglese)bp video hd (Hindi (indiano)>Inglese)mentosa (Spagnolo>Tedesco)blau (Tedesco>Svedese)français (Francese>Swahili)nikotinsyraläkemedel (Svedese>Tedesco)kabar saya baik (Indonesiano>Inglese)black elderberry (Inglese>Tagalog)tarikh tamat tempoh (Malese>Inglese)sal de uva (Spagnolo>Inglese)gospodnji (Serbo>Vietnamita)i'sa ne tel (Latino>Inglese)sinundo sa airport ang tatay ng pamilya (Tagalog>Inglese)性变态 (Cinese semplificato>Francese)generaatori (Estone>Lettone)افلام سكس بنات صغير اغتصاب (Arabo>Inglese)chiusura (Italiano>Spagnolo)amina sedang membuat kek coklat kesukaannya (Malese>Inglese)